Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Akụkọ nwata Graham Potter gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ ndụ Graham Potter anyị na-agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata ya, ezinụlọ, nwunye (Rachel Potter) na nne na nna (Steve na Val Potter). Nke ka nke, ụdị ndụ onye njikwa bọọlụ Bekee, Ndụ nkeonwe na Net Worth.
Na nkenke, ihe ncheta a bụ gbasara akụkọ ndụ nke Graham Potter. Otu nwoke nke njem ya n'elu bụ nke a na-adịghị ahụkebe.
Nke mbụ, ndị isi bọọlụ Birmingham tụbara ya (onye na-eto eto) n'ime ndị otu ha mgbe ọ na-adịbeghị njikere. N'ihi na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma, ndị na-akwado ya kwara ya ákwá n'oge ọ bụ nwata.
N'ezie, ihe ndị Fans Birmingham mere Graham tụrụ ya n'obi - na mgbu. Ọbụna ruo taa, o chefubeghị banyere ya.
N'ịbụ ndị ndị na-akwado ya na-akwa ụda mere ka Potter daa n'anya maka ọrụ football. Site n'oge ahụ, ọ malitere ịhụ ihe dị iche.
Ewezuga ịbụ onye a na-agba, onye ọzọ n'ime ụlọ egwuregwu egwuregwu ya katọkwara Graham Potter ka ọ daa. N'oge ụfọdụ, ọ na-eche ma ọ bụrụ na ọrụ football ọ bara uru ọbụna. Nke ahụ mere ka ọ lara ezumike nká nke ukwuu (n'ihi nkụda mmụọ) mgbe ọ dị afọ 30 dị nro.
Nke bụ eziokwu bụ na Graham Potter akwụsịghị ezumike nka n'ihi na ọ merụrụ ahụ. Ọ bụ naanị mkpebi.
Nke a bụ nwoke, mgbe a na-emegbu ya dị ka "onye ọkpụkpọ shit". Onye ole na ole kwenyere na ọ ga-eme nke ọma na ndụ, karịsịa mgbe ọ kwụsịrị ịgba bọl mgbe ọ dị afọ 30.
Iji kpalie agụụ akụkọ ndụ gị gbasara Graham Potter's Bio, anyị akọwapụtala akwụkwọ akụkọ ndụ nwata na ihe ịga nke ọma ya. Nke a bụ mmalite anyị zuru oke na njem ndụ Graham Potter na trajectory.
Akụkọ nwata na akụkọ ihe mere eme nke Graham Potter.
Ee, ọ bụ onye a ma ama maka ịbụ otu n'ime ndị nkuzi Britain nwere akọ nke ọma.
Nke a bụ nwoke kụziri nkuzi football na mahadum. O nwere akara ugo mmụta mahadum abụọ ma nyefee ndị nkatọ ya nkwụghachi kachasị mma - nke bụ, gosipụtara na ha ezighi ezi.
N'agbanyeghị ọtụtụ otuto ọ na-enweta dị ka onye njikwa, Lifebogger ghọtara na ọ bụghị ọtụtụ ndị na-agba bọl na-agụta ihe omimi nke Graham Potter's Biography. Ugbu a, na-enweghị mmasị ọzọ, ka anyị kpughee akụkọ ihe mere eme nke Manager.
Akụkọ nwata Graham Potter:
Maka ndị mbido akụkọ ndụ, ọ na-aza aha zuru oke - Graham Stephen (mgbe Nna ya gasịrị) Potter. A mụrụ onye njikwa Bekee na 20th ụbọchị nke May 1975 nne ya, Val Potter na nna, Steve Potter, na Solihull, United Kingdom.
Graham Potter nọrọ afọ nwata ya na English West Midlands. Nke a bụ mpaghara nke abụọ kachasị na England na-esote Greater London.
Graham tolitere na gburugburu bọọlụ nwere obere ihe mejupụtara ndị na-akwado Birmingham.
Mgbe ọ bụ nwata, ndị mmadụ hụrụ ya n'anya nke ukwuu - n'ihi ọgụgụ isi ya (mgbe ọ na-ekwu okwu) na mfe nghọta anụ ahụ. Mkpụrụ ndụ ihe nketa nke nne na nna Graham Potter nyere ya ọgụgụ isi ahụ. Ọ zụlitekwara ahụ ya ka ọ bụrụ ogologo ọdịdị ya, akpụkpọ ahụ dị nro, na nwa nwoke dị gịrịgịrị.
Ihe ndabere Ezinụlọ Graham Potter:
Solihull, ebe ọ nọrọ na nwata, bụ obodo ahịa maka ọtụtụ ndị na-akpata obere ego. Ndị nne na nna Graham Potter (Steve na Val) zụlitere ya n'ụlọ dị mma.
Na-akwado nke ukwuu, ha ghọtara ihe ọ chọrọ ime na ndụ ma duzie ya n'ebumnobi ya.
Ka m na-ede akụkọ ndụ a, ndị nne na nna Graham Potter abịaghị n'oge. Malite na nna ya (Steve), ọ nwụrụ na Jenụwarị 2020. Val, mama ya, nwụrụ ọnwa isii tupu mgbe ahụ - tupu ọmarịcha di ya (July 2019).
Ezinụlọ Graham Potter:
Solihull bụ nnukwu obodo ahịa nke nwere agbụrụ onye njikwa. Na mpụga London, obodo (nke bụ ime obodo) bụ otu n'ime mpaghara bara ọgaranya na UK.
Ezinụlọ Graham Potter – Kọwaa.
Ebe ezinụlọ Graham Potter si (Solihull) bụ nke a ma ama dị ka ebe obibi nke ụgbọ ala Land Rover ama ama. Obodo ime obodo bụkwa ebe ndị otu egwuregwu ịgba ọsọ Britain nọ.
Ihe ndabere agụmakwụkwọ Graham Potter:
Site n'oge mbụ, onye njikwa n'ọdịnihu kpebiri na ọ ga-aga ụlọ akwụkwọ football. Potter malitere dị ka onye na-azụ ụmụ akwụkwọ na Birmingham City Football Institution.
Dị ka onye ọkpụkpọ dị ala, nwata ahụ jisiri ike gụchaa ụlọ akwụkwọ mmuta ha n'afọ 1991.
Akụkọ ndụ Graham Potter - Akụkọ egwuregwu bọọlụ:
Ịbụ onye na-egwu egwuregwu dị n'okpuru ala adịghị enyere onye ntorobịa nke nwere oge siri ike ịmalite ndụ na ndị agadi.
Ọtụtụ oge, ndị na-akwado Birmingham City gbapụrụ Graham Potter n'egwuregwu ahụ. Yiri Ralf Rangnick, ọ malitere ọrụ egwuregwu ya siri ike.
Nsonaazụ nke arụmọrụ adịghị mma ghọrọ otu n'ime mmekpa ahụ mbụ nke Graham. Site na oge ndị Fans nke ya na-akwa ya, nwa nwoke ahụ ghọtara ọdịdị na-agbanwe agbanwe nke ọrụ ọkachamara ya.
Lee. Ụbọchị kacha njọ Graham Potter dị ka onye egwuregwu bọọlụ. Onye na-akwado Birmingham City chịrị ya emo ma kwaa ya ọnụ.
Ogbenye Graham hụrụ na ọ dị oke ọkụ na ọ naghị akwado ịmalite bọọlụ agadi. Okwu ahụ niile malitere mgbe ndị ọrụ Birmingham City tụbara ya na njedebe miri emi. N'ikwu okwu banyere ahụmahụ ọrụ mbụ ya, onye njikwa ahụ kwuru;
“O siri ike; ntakịrị baptism nke ọkụ. Birmingham City na-alụ ọgụ mgbada. Onye nwe ya nọ na-agbanwe, klọb ahụ nọkwa na-ata ahụhụ.
Oge ahụ abụghị oge dị mma maka m dị afọ 17.
ọ bụ oge ọjọọ na akụkọ egwuregwu bọọlụ Birmingham City"
Mgbe ọ hapụsịrị Birmingham City, Graham Potter nọrọ afọ ndị na-esote ya dị ka onye ọkachamara na ndị otu etiti dị ka Stoke, Southampton na West Bromwich Albion. Oge 1996/1997 bụ afọ ya kacha mma dị ka onye egwuregwu bọọlụ na-agba bọọlụ na Premier League.
N'oge ahụ, Graham Potter nyeere ndị otu ya aka imeri Onye Pụrụ Ime Ihe Niile Manchester United site na goolu isii ruo atọ.
Mmeri ahụ nwetara Graham ọkpụkpọ oku England nke mbụ ya. Cheta, ha akpọghị ya na ọdụm atọ, mana England Under-21.
Akụkọ ezumike nka Graham Potter - Ime nke ahụ mgbe ọ dị afọ 30:
Ịgba egwu na Premier League maka obere oge na iru England U-21 tupu David Beckham bụ ihe kachasị mma Graham nwere na ọrụ ọkachamara ya.
Mgbe e resịrị ya na klọb ndị ọzọ dị ala, ihe malitere ịka njọ maka Potter.
N'oge ụfọdụ, ọ kwụsịrị nkwekọrịta site na York - dịka onye ọkpụkpọ Njikọ Abụọ. Graham Potter hụrụ onwe ya n'azụ, n'ihi na ọ dịghị ụlọ ọgbakọ chọrọ itinye ego ha n'ime ya.
N'oge ahụ, ọ dịghị ụgwọ ọ bụla abata. Onye Potter kasị elu na-enweta bụ £ 30,000 kwa afọ - na asọmpi ndị dị ala.
O mechara nwee ihe ịma aka ọnwa asatọ na Boston United, ebe ọ na-egwuri egwu na ọkwa egwuregwu bọọlụ Bekee. Graham Potter aghaghị ime njem awa abụọ na ọkara, nke bụ ebe dị anya site n'ụlọ ya ruo ụlọ ọgbakọ.
N'ihi nkụda mmụọ, o mechara banye n'egwuregwu bọọlụ na-abụghị Njikọ site na iji otu ọnwa mbinye ego na Shrewsbury Town.
Mgbe ahụ, gburugburu February 2004, ohere bịara maka Graham isonye na Horton's Macclesfield. N'ụzọ dị mwute, ụlọ ọrụ a mesịrị hapụ ya.
Dị ka onye na-agba bọl, Potter hụrụ onwe ya ka ọ na-ada mbà. Ọtụtụ oge, ndị na-agba bọl na-enwe ike ịga n'ihu ruo ogologo oge ọ gwụla ma mmerụ ahụ na-amanye ha ịla ezumike nká.
Okwu Graham Potter dị iche. Ọ dịghị mgbe ọ chere mmerụ ahụ ịchụpụ ya. Mgbe ọ dị afọ 30, o kpebiri ịkwụsị football.
Ogbenye Graham Potter hapụrụ football ka ọ dị obere. Mgbe afọ iri atọ.
Ndụ mgbe ezumike nka si n'ọrụ egwuregwu:
N'ikwu okwu na Atlantic banyere mkpebi ya ịkwụsị ọrụ egwuregwu ya, Graham kwuru otu oge;
“Ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-asị m, ‘Biko nọrọ n’egwuregwu ahụ, gwuo egwu ruo ókè i nwere ike’ Ma agwara m ha mkpebi m bụ ihe kwesịrị ekwesị ka m mee.
Agbanyeghị, ọ bụ oge siri ike.
Mgbe m kwụsịrị ịgba bọl na 30, ekpebiri m ime mkpebi siri ike nke iche echiche banyere ihe m ga-eme n'oge ndụ m niile."
Mgbe ezumike nká na football, ogbenye Graham nwere mmetụta nke mmetụta uche. Bọọlụ bụ akụkụ buru ibu nke njirimara ya, na ịhapụ ya ka ọ dị ka akụkụ ya adịghịkwa ebe ahụ. N'ihi ndụmọdụ sitere n'aka nne na nna ya na enyi nwanyị ya (Rachel), o mesịrị kweta na ya.
Nchụso agụmakwụkwọ Graham Potter:
Mgbe ọ gbasachara nne na nna ya na ezigbo ndị enyi ya, onye na-eche echiche nke ọma tinyere akwụkwọ wee nweta nkwado mmụta n'aka ndị otu egwuregwu bọọlụ ọkachamara (PFA). Nkuzi akwukwo a mere ka Potter gụchaa na Mahadum Open na Disemba 2005.
N'oge Potter gụsịrị akwụkwọ na Social Sciences site na Open University, ọ malitelarị ịmụta ịghọ onye nchịkwa football. N'ezie, nchikota nke football na agụmakwụkwọ mere ka ọ dị mkpa maka ọchịchọ ya n'ọdịnihu.
Ọrụ bọọlụ mbụ:
Mgbe gụsịrị akwụkwọ na Mahadum, Potter malitere ịrụ ọrụ dị ka onye njikwa mmepe football maka Mahadum Hull. N'ịbụ onye dị umeala n'obi dị ka nwoke, ọ nakweere £ 17,000 kwa afọ - nke ọ na-eji akwụ ụgwọ agụmakwụkwọ ya na ilekọta ezinụlọ ọhụrụ ya.
Graham kwuru mgbe ọ na-ekwu maka nkwadebe maka ọrụ football mbụ ya;
M na-echeta mgbe niile usoro m si nweta ajụjụ ọnụ.
Ọrụ ahụ bụ ọkwa gụsịrị akwụkwọ. Iji gafere, aghaghị m igosi nghọta m banyere football.
Ọrụ ahụ bịara n'oge siri ike, mgbe enweghị m ego.
Akwụsịla m ịgba bọl ma chọọ ihe m ga-eme ka ezinụlọ m na-aga.
Ọ dị mkpa ịmara na Graham ka lụrụ nwunye ya - Rachel Potter - mgbe ọ nwetara ọrụ £ 17,000 kwa afọ. Obi dị m ụtọ na o nwere onye ibe ya dị umeala n’obi bụ́ onye rụkwara ọrụ iji nyere obere ego ya aka. Nwunye Graham Potter, bụ́ Rachel, ghọtara ọnọdụ ya ma guzoro n'akụkụ ya.
Ijikwa ndị inyom Ghana bọọlụ:
Afọ abụọ mgbe ọrụ mbụ ya gasịrị, Graham Potter nwetara ọzọ. Oge a, ọ nwetara ọrụ dị ka onye ntụzi nka nka nke otu ụmụ nwanyị Ghana. N'afọ ahụ 2007, otu ụmụ nwanyị Ghana tozuru oke maka asọmpi Iko Mbaụwa nke ụmụ nwanyị 2007 na China.
Anyị na ndị Ghana Ghana rụkọrọ ọrụ n'oge m na Mahadum Ụlọ Nzukọ. Otú ahụ ka ọrụ si malite.
Potter na-akọwa. O ji obere ahụmahụ ya na-arụ ọrụ na Mahadum Hull nyere ndị otu ụmụ nwanyị aka. Ọ bụ ahụmịhe mmụta na-atọ ụtọ ịhụ onwe ya na asọmpi mba ụwa yana ndị egwuregwu sitere na omenala na mmalite dị iche iche.
Ọrụ Ghana bụkwa ihe ịma aka nye Potter, ebe ọ nọrọ izu isii n’ebe nwunye ya na ezinụlọ ya nọ. N'ụzọ dị mwute, na asọmpi ahụ, Ghana meriri egwuregwu atọ ahụ. N'enweghị nsogbu maka mfu ahụ, Graham ji nke ahụ dị ka ụzọ isi nweta ahụmịhe.
Inweta nzere Masters – Leeds Metropolitan University:
Mgbe 2007 FIFA World Cup ụmụ nwanyị gasịrị, Graham Potter gbara arụkwaghịm n'ọrụ ya wee rụọ ọrụ dị ka onye nnyemaaka nchịkwa maka Squad Universities England. Ọrụ a kpaliri mmasị ya ibido mmemme nzere masta.
Potter na-elekọta otu egwuregwu bọọlụ na Mahadum Leeds Metropolitan. Mgbe ahụ, ọ gụrụ akwụkwọ maka nzere Masters na onye ndu, onye na mmepe ọkachamara. Nnyocha e mere na ọ mechara bụrụ onye ji akara ugo mmụta nna ukwu na onye ndu na ọgụgụ isi nke mmetụta uche.
Afọ ndị a nọrọ na ngalaba Mahadum dị mma maka mmụta na ime ya. Potter jikwaa otu ndị nọ n'ọkwa nke itoolu nke bọọlụ Bekee. Dị ka ya si kwuo, Ìgwè mmadụ dị ole na ole, ikekwe 100 - mmadụ 200 na-aga egwuregwu ma ọ bụrụ na ị nwere chi ọma.
Bọọlụ mahadum bụ gburugburu ebe ị nwere ike imehie ihe, nke m mere. Mana ọ bụụrụ m ebe mmụta dị mma na oge mara mma nye m.
Akụkọ ndụ Graham Potter - Njem a na-akọ akụkọ:
Onye njikwa na-eto eto nwere mmasị ime ka agụụ agụmakwụkwọ na nke football sonyere ndị agha. Nke a na-akọwa ihe omume ya na mmalite 30s ya - mgbe ọ na-azụ ọzụzụ na mahadum England. Mgbe Graham Potter nwetasịrị akara ugo mmụta nna ya ukwu, o kpebiri itinye akwụkwọ maka ọrụ nkuzi ka ukwuu.
N'ụzọ dị ịtụnanya, nhọrọ nke ọrụ nchịkwa mbụ ya na-abụghị nke mahadum nọgidere bụrụ ihe ijuanya nye ọtụtụ ndị. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eto eto na-eto eto si England ga-ahọrọ ịmalite site na ndị otu Bekee dị ala (na England), Potter na-ahọrọ ebe kachasị njọ.
Na December 2010, Potter mere nzọụkwụ obi ike nke ịkwaga ezinụlọ ya n'ebe ọrụ ọhụrụ ya, obodo ski dị na etiti Sweden. Ọ ga-abụ onye nlekọta otu n'ime klọb ndị Sweden kacha asị bụ ndị chụpụrụ n'ọkwa asọmpi nke atọ ha.
N'ọnwa ahụ, Disemba 2010, Potter bịanyere aka na nkwekọrịta afọ atọ dị ka onye njikwa nke Östersund. Nke a bụ klọb na-egwuri egwu na ọkwa nke anọ nke bọọlụ Sweden. Ugbu a, kedu ka Potter si nweta ọrụ nkuzi Sweden?
Ọrụ ahụ sitere n'aka otu n'ime ndị enyi ya, Graeme Jones, onye bụ onye inyeaka Roberto Martínez na Swansea City. Ọ tụrụ aro Potter nye onye isi oche Östersund, Daniel Kindberg. Mgbe a gbara ajụjụ ọnụ (ebe ọ masịrị onye ya), ọrụ ahụ bịara n'ụzọ ya.
Akụkọ Sweden Graham Potter – Ọbịbịa:
Charley, bụ ọkpara ya, dị nanị ọnwa 11 mgbe ọ nwetara ọrụ Östersund. Ezinụlọ Graham Potter (nwunye ya, Rachel na nwa ya nwoke) niile nwere uwe bekee mgbe ha rutere n'ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Sweden.
Mgbe ha rutere ebe ahụ, ha hụrụ na okpomọkụ dị (na-erughị ogo 20). Ozugbo, Rachel Potter rịọrọ ihe mkpuchi iji jide n'aka na onye ọ bụla na-ekpo ọkụ nke ọma. Graham enweghị ike ịpụ apụ ruo etiti February ka ịmalite ọrụ ya n'ihi na oyi dị oke
Mgbe ụbọchị mbụ ya na-arụ ọrụ, Graham chọpụtara na ọ dịghị onye nwere mmasị na klọb ahụ. N'ezie, ọ chọpụtakwara na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efu ezigbo nkwado maka klọb ahụ. Nke a bụ akụkụ ụfọdụ n'ihi mmetụta mgbochi ndị mba ọzọ nke njikwa gara aga nwere.
Graham Potter hụkwara na ọtụtụ n'ime ndị egwuregwu abịala na nkwekọrịta dị mkpirikpi. Na enweghị izute ihe ndị egwuregwu chọrọ n'akwụkwọ nkwekọrịta so kpatara enweghị omume ọma nke ndị egwuregwu na ọdịda ụlọ ọgbakọ. N'ikpeazụ, enwere ọtụtụ ihe ọjọọ na-efegharị gburugburu .
Akụkọ ịga nke ọma Östersund - Nkwalite Tripple sitere na ọkwa nke anọ nke Sweden gaa na Njikọ Njikọ:
Nkpughe bịara, nke mere ka o kwenye na ọ ka mma ịnọ na ọkwa nke itoolu nke football Bekee karịa ọkwa nke anọ nke Swedish football. Otu a ka Graham Potter si hụ ọnọdụ Östersund.
Potter, ka ọ maliteghachiri n'ụzọ zuru ezu, zutere onye isi oche klọb na, na nkà ihe ọmụma, ha jikọtara nke ọma. O wetara echiche ya nke ihe ọ chọrọ ime dị iche iche maka Östersund. Potter siri ọnwụ na ịmepụta gburugburu ga-eme ka ndị otu ya na-egwu otu ụdị football.
N'itinye echiche ya n'ọrụ, o gosipụtara njikere ya ịnakwere na ime mgbanwe maka ihe ịma aka ọhụrụ. Nke ahụ mere ka Ostersund nọgide na-emeri. N'okpuru Graham Potter, a kwalitere klọb ahụ ugboro atọ, ọbụna merie iko Sweden.
Graham Potter na ndị egwuregwu Östersund na-eme ememe ka ọ na-enyere ha aka imeri otu iko.
Nke ka mkpa, Potter tozuru otu a maka 2017/2018 Europa League. N'oge ahụ, Ostersund kpasuru ụfọdụ aha Europe a ma ama dị ka Galatasaray na Hertha Berlin - iji merie otu ndị nwere mmasị na Athletic Bilbao.
Na ọkwa knockout nke Europa League, ndị otu Graham Potter zutere otu ọgbakọ Bekee - Arsenal nke Pụrụ Ime Ihe Nile. Ọ bụrụ na ị hụbeghị isi ihe egwuregwu ahụ, nke a bụ ya. Graham Potter's Östersund meriri Arsenal na Emirates, ala nke ha.
Mgbe egwuregwu ahụ gachara, ndị Graham Potter mere emume dịka ha meriri Europa League - n'ihu ụmụntakịrị ndị ọbịa ha na-eleta n'ama egwuregwu Arsenal. Site n'ụbọchị ahụ, akụkọ malitere ịgagharị na ndị mmadụ malitere ịjụ… Ònye bụ Graham Potter? onye nchịkwa Bekee ná mba ọzọ.
Kedu mmetụta ọ bụ, ka ha merichara Arsenal.
Akụkọ ndụ Graham Potter - Akụkọ ịga nke ọma England:
Plaudits gburugburu England toro ya maka "ụdị egwuregwu ọ na-agafe agafe" na ikike ijikwa otu ndị na-emefu ego dị ala dị ka Östersund. Na Sweden, Graham Potter meriri football. O mere Östersund (otu nkewa nke anọ) nweta nkwalite atọ n'usoro.
Mgbe ọ ghọchara onye njikwa kacha mma na Swedish dum, Potter, n'oge a, chere na ọ dị mkpa ịgafe n'ihe ịma aka ka ukwuu. O jiri anya mmiri laghachi UK. Ọ bụghị mkpebi kwụ ọtọ ịhapụ ụlọ ọgbakọ na-efe ya ma na-ebu ya mgbe niile - dịka ezigbo dike ha.
N'ikwu banyere ahụmahụ nke ịhapụ Östersund, Potter kwuru;
Ịkwụsị ịgba bọl mgbe ọ dị afọ 30 bụ ihe siri ike, ma ịhapụ Ostersund bụ ihe na-akpasu iwe karị - ọbụna nye ezinụlọ m.
Ọ kpasuru ọkpara m iwe. O bere ákwá maka ịhapụ ụlọ akwụkwọ ya. Obi tọrọ nwunye m ezigbo ụtọ ibi na Sweden.
Ntụkwasị obi bụ, Potter - onye bụ naanị mmadụ - gbakwara anya mmiri. Sweden ghọrọ ebe obibi ya na ebe pụrụ iche maka ezinụlọ ya. Mkpebi isi n’obodo ahụ mee ka a mara ya adịrịghị ya mfe.
Graham Potter Swansea Akụkọ:
Akụkọ ịga nke ọma Potter na Östersund - gụnyere imeri Arsenal na Europa League, mere ka ọ bụrụ ọkwa nchịkwa na Swansea City. Otu klọb nwere aha ọma maka bọọlụ mara mma n'okpuru Roberto Martinez, Brendan Rodgers na Michael Laudrup.
Mgbe ọ nọ na Swansea, Potter kpuchiri otu squad ọ kpọrọ oke ọnụ. Ọ mepụtara otu ndị na-eto eto nke na-eji nnukwu panache egwu egwu. Igodo ya, Daniel James, dọwara ndị mmegide ya na nnukwu onye ọkpọ ya, Oli McBurnie, meriri ihe mgbaru ọsọ 22, na-atọ ndị Fans ụtọ.
Oge 2018/2019 ahụ, o duuru ọgbakọ ahụ gaa na nkeji iri na ise nke iko FA 2018–19, ebe ha na-anabata Manchester City. N'egwuregwu ahụ, Potter buru ụzọ duru ndị mmeri Premier League 2-0 ka naanị nkeji iri atọ gachara.
Agbanyeghị, ihe mgbaru ọsọ atọ mbubreyo n'ime nkeji iri abụọ gara aga wetara nnọchibido nke Potter na njedebe. Otu sitere na Bernardo Silva, mmejọ goolu nke onwe nke Swansea na onye meriri n'oge Sergio Agüero meriri akụkụ Potter – warara.
Ọbụlagodi na mmeri Pep Guardiola dị warara, onye njikwa Swansea nwetara ọtụtụ otuto sitere n'aka ndị egwuregwu bọọlụ. Ọtụtụ ihe ịga nke ọma n'ụlọ na inwe ọchịchọ iji akọ na-ama Man city emesia nwetara Potter ọrụ kacha ukwuu nke ọrụ ya - ijikwa otu ọgbakọ Premier League.
Akụkọ ịga nke ọma Brighton & Hove Albion:
Ọrụ Potter rụrụ na Ostersund na Swansea gbanwee profaịlụ ya wee meghee ụzọ maka ịrụ ọrụ na Premier League.
N'ime oge EPL ndị mechara, Potter duziri ndị Seagulls nke ọma, ọ bụghị naanị na nchekwa, kama na-agwụcha na ebe egwuregwu Premier dị mma. Ọtụtụ oge, imeri nnukwu ìgwè na isii kachasị elu site na iji ndị na-emefu ego dị ala na-eme ya onye nchịkwa England na-eme.
N'ezie, ụdị njikwa nwere ọgụgụ isi nke Graham Potter mere BBC Sport bipụta akụkọ gbasara ya n'ọnwa Ọktoba 2021. Ọ na-ekwu maka njem ya, bilie dị ka onye njikwa ma were ya dị ka onye njikwa England ga-anọchi anya ya. Gareth Southgate.
Iji otu dị ka Brighton wee nweta ihe ịga nke ọma EPL chọrọ n'ezie ụdị nka dị iche iche. Usoro ihe onwunwe nke Potter mere ka ọ bụrụ otu n'ime ihe kachasị mma na njikwa football nke oge a. Akụkọ ndị ọzọ nke onye njikwa, dị ka anyị na-ekwu, bụ otú akụkọ ihe mere eme.
Banyere Rachel - nwunye Graham Potter:
Enwere okwu zuru ụwa ọnụ na n'azụ nwoke ọ bụla na-eme nke ọma na Football na-abịa WAG ma ọ bụ enyi nwanyị mara mma. Maka Graham Potter, enweela otu nwanyị guzoro n'akụkụ ya n'oge niile. Ya, onye bụbu enyi nwanyị, ugbu a nwunye ya, abụghị onye ọzọ ma ọ bụghị Rachel.
Zute nwunye Graham Potter. Aha ya bụ Rachael.
Alụmdi na Nwunye na Ịgba alụkwaghịm n'otu ụbọchị:
Mara mma Rachel Potter malitere ịlụ Graham n'oge ọrụ ọrụ ya. Ị maara?… Graham Potter lụrụ Rachel, otu ụbọchị York City Football Club kwupụtara na ha ahapụla ya. Lee ụzọ jọgburu onwe ya isi na-emeso nwoke lụrụ ọhụrụ!
N'ime oge ahụ, ọrụ egwuregwu ya adịlarị ala - na-enwe olileanya efu banyere football ọ na-aga n'ihu ruo ogologo oge. N’ezie, agbamakwụkwọ ahụ dị n’etiti Graham na Rachel, na May 31, 2003 (ụbọchị York tọhapụrụ ya) bụ ụbọchị ọ na-agaghị echefu echefu.
Eziokwu banyere Rachel Potter:
Ihe mbụ mbụ, ọ bụ nwanyị nke na-enwe ahụ iru ala (enweghị nrụgide) na di ya - ọbụlagodi n'oge mmechuihu. Ị maara?… egwu mbụ Graham na Rachel mere n'ụbọchị agbamakwụkwọ ha bụ egwu akpọrọ;
'Site n'ụzọ, enweghị m ọrụ!'.
Rachel bụ onye ghọtara n'ezie ihe mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-agba ọsọ / onye njikwa dara ogbenye pụtara, na-enyere ya aka inwe ọganihu. O kwenyekwara na ịlụ onye isi nchịkwa Bekee na-abịa na ịghọta ókèala ọhụrụ.
Nwunye Graham Potter – Racheal, kemgbe ọtụtụ afọ, achụọla ihe n’àjà maka ya- n’agbanyeghị na ọ pụtara idobe ndụ nke ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ hapụrụ azụmahịa Pilates ya, gụnyere ihe niile dị n'azụ - ka ya na di ya biri (afọ asatọ) na Ostersund, Sweden.
Ụmụ Graham Potter nwere Rachael:
Alụmdi na nwunye dị n'etiti di na nwunye emewo ka ọtụtụ ndị nọ n'ezinụlọ. Ka m na-ede Bio nke a, Rachel na Graham Potter nwere ụmụ atọ ọnụ. A mụrụ nwa mbụ ha, Charlie Potter na mmalite 2010.
Mgbe ezinụlọ Graham Potter bi na Östersund, ya na Rachael (na 2014) nabatara otu ejima na ezinụlọ ha. Foto dị ebe a, aha ha bụ Theo na Sam Potter. Lee ezinụlọ mara mma - n'oge ụbọchị ha na Sweden.
Graham Potter na-ejide otu n'ime ụmụ ejima ya - na Charlie, nwa mbụ ya. Rachel na ejima nke ọzọ nọ. Ụmụ ejima na-aza aha - Theo na Sam.
Ndụ nkeonwe Graham Potter:
Ọ nwere ọgụgụ isi nke ukwuu, nwere ọgụgụ isi na onye na-eche echiche miri emi. Ọkpụite na-adị jụụ, ọ naghị ada ụda site n'okike, nwere ike iji njakịrị ya na-akpa ọchị ma na-emekọ ihe ọnụ.
Ọ na-akpa àgwà dị ka onye nkụzi ụlọ akwụkwọ ọgụgụ isi ọbụna mgbe ọ na-agwa ndị egwuregwu ya okwu. Ọ bụ ya mere e ji hụ ya n’anya nke ukwuu.
Àgwà nke inyere ndị ogbenye aka:
Ewezuga bọọlụ niile, enwere ihe ị nwere ike ịmaghị gbasara Graham Potter. Ugbu a, onyonyo a nke onye njikwa Brighton na-akọwa ihe gbasara àgwà ya.
Ndụ onwe nke Graham Potter – KỌWAA.
Ụfọdụ ndị njikwa Premier League na-eji ezumike mba ụwa gaa ezumike dị nkenke, ebe ndị ọzọ na-eji ya na-anọkọkwu oge na ezinụlọ ha. Nwoke a, Graham Potter, dị iche.
Mgbe na ezumike, onye njikwa football na-etinye oge dị mma nke oge ya iji mee ka ndị na-enweghị ebe obibi mara mma. Graham Potter na-eburu ụgbọ ala ya (raara onwe ya nye ndị na-enweghị ebe obibi), na-anya ụgbọ ala n'ebe ha nọ, na-eme ụlọ ya ma na-ebuga ọrụ ebere. O nwere obi yiri ya Marcus Rashford.
Kedu ihe bụ nwoke Graham Potter! Ọ bụghị maka onwe ya, ọ na-eche maka ndị na-enweghị ebe obibi.
Ndụ Graham Potter:
Onye njikwa bọọlụ Bekee - site na mmalite ya - abụbeghị ụdị mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ dị mma ịsị Graham bụ ihe dị iche Jose Mourinho. Ọ dịghị mgbe ọ na-ekwu na afọ ju onwe ya okwu banyere onwe ya ma ọ bụ njikwa rụzuru.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Potter na-ebi ndụ dị mfe. Ọ bụ nke gbadoro ụkwụ na gburugburu ezinụlọ ya na ọrụ football ya. Onye njikwa bọọlụ ghọtara na oge ezinụlọ bụ oge dị mma. Ọ na-elebara nwunye ya anya nke ukwuu, nke ahụ na-emekwa ka obi na-adịkwu ná mma.
Ndụ Ezinụlọ Graham Potter:
Ndị kpọbatara ya n’ụwa a bụ isi ihe mmụta ya. Mgbe ndị na-akwado Birmingham kwara ya ụta n'oge ọ bụ nwata, nne na nna Graham Potter hụrụ na ọ dịghị mgbe ọ kwụsịrị ike ya dị mma. Taa, obi dị ya ụtọ na o meriri ọtụtụ ihe.
Lifebogger na-eji ngalaba a tụnyekwuo ìhè na nne na nna Graham Potter (Val na Steve), ndị na-abịaghị n'oge. Ka anyị malite na nwaanyị mụrụ ya.
Nne Graham Potter:
Onye njikwa Brighton dị ezigbo nso na Val, mama ya tupu ọ anwụọ na Julaị 2019. Graham agwaghị ndị na-akwado ya maka ọnwụ nne ya nwụrụ, n'ihi na ọ na-eru uju ọnwa ole na ole. Agbanyeghị, o mepere n'oge ezumike Coronavirus nke 2020.
N'ikwu okwu banyere ọnwụ mama ya, onye dị afọ 45 mgbe ahụ kwuru;
'Ekwesịrị m ime ya n'oge ụfọdụ.
yabụ mkpọchi a bụ oge ime nke ahụ.
ọ dịkarịa ala, oge iru újú na ịhazi ihe mere nne m.
Achọrọ m ezumike a.
Mgbe ụfọdụ, a na-ebupụ anyị ndị hụrụ bọọlụ n'anya n'ụwa ọjọọ a - dịka anyị ga-abụ ụdị rọbọt.
Dịka Onye njikwa Brighton mere okwu mmetụta uche ndị ahụ, ọ maghị na nne ma ọ bụ nna ọzọ ga-efunahụ ya n'ime izu ole na ole. Ogbenye ya!!
Nna Graham Potter:
N'oge ogbako ndị nta akụkọ ya na ogige ọzụzụ Brighton na Jenụwarị 2020, Onye njikwa ahụ kwupụtara mwute, ekweghị ekwe, na enweghị itinye uche. Onye ọ bụla amaghị (ọbụlagodi onye nta akụkọ), Graham ka furu efu nne na nna ya nke ọzọ - nna ya ọ hụrụ n'anya.
N'ihi na ọ bụghị onye ọ na-emebu n'ụbọchị ahụ, ọ na-ewe mgbalị ndị nta akụkọ na-eme iji jụọ ma ọ dị ihe ọ bụla dị njọ na ya - na ndetu nke onwe. Nke ahụ bụ mgbe ha chọpụtara banyere nna Graham Potter, Steve. Tupu mgbe ahụ, onye njikwa ahụ ekwubeghị banyere nne na nna ya n'ihu ọha.
Na-amaghị onye ọ bụla, onye njikwa Brighton (tupu ogbako ndị nta akụkọ) ka kpọbatara oku ekwentị ebe mmadụ mebiri ozi na nna ya, Steve, anwụọla. Dị ka nwoke nwere ike ime, o siri ike ịga ajụjụ ọnụ ahụ.
Eziokwu Graham Potter:
Na-emecha akụkọ ndụ a, anyị ga-eji ngalaba a gwa gị eziokwu karịa gbasara onye njikwa bọọlụ Britain a ma ama. Na-egbughị oge gị dị oke ọnụ ahịa, ka anyị bido.
Eziokwu #1 - Ụzọ nkuzi na-adịghị mma:
Ndị na-agba bọọlụ Östersund na ndị ọrụ nọ n'okpuru Potter ga-agba akaebe mgbe niile maka ụzọ dị egwu ya na njikwa. Laa azụ n'oge, onye njikwa Bekee kwere ka ndị egwuregwu ya na ndị ọrụ ya tinye aka na mmemme obodo - nke na-enweghị njikọ na football dị ka egwuregwu.
Otu n'ime ndị dị otú ahụ na-agụnye ime ka ha (ma ndị egwuregwu na ndị ọrụ) na-eme ihe nkiri na mmepụta egwu. Naanị ihe Potter chọrọ bụ ka ha si na mpaghara nkasi obi ha pụta. N'ikpeazụ, echiche ahụ niile rụrụ ọrụ. Ụmụ nwoke Östersund ka nọgidere na-emeri egwuregwu.
Eziokwu #2 - Nkwụsị ụgwọ ọnwa Graham Potter:
Onye bụbu onye isi Swansea na-eburu ụlọ nke £1 nde kwa afọ. N'ịkwụsị ụgwọ ọnwa ya, anyị nwere ihe ndị a.
Nkwụsị ụgwọ ọnwa Graham Potter Brighton na Pound (£) - 2021 stats.
Nkwụsị ụgwọ ọnwa Graham Potter Brighton na Euro (€) - stats 2021.
Kwa Afọ: £ 1,000,000 € 1,191,898
Ọnwa kwa: £ 83,333 € 99,324
Kwa Izu: £ 19,201 € 22,885
Kwa :bọchị: £ 2,743 € 3,269
Oge Awa ọ bụla: £ 114 € 136
Nkeji ọ bụla: £ 1.9 € 2.2
Sekọnd ọ bụla: £ 0.03 € 0.04
Ebe ị malitere ile Graham Potter's Bio, nke a bụ ihe ọ nwetara na Brighton.
Ebe Graham Potter si, nkezi nwa amaala UK na-enweta ihe dịka £26,000. Ụmụ amaala dị otú ahụ ga-achọ ịrụ ọrụ afọ 38 iji nweta ụgwọ ọnwa nke onye njikwa na Brighton kwa afọ.
Eziokwu #3 - Nkọwa nke atụmatụ Graham Potter:
Omume nke ịmepụta mgbanwe usoro, ịchịkwa ihe onwunwe, iwulite site n'azụ, iji n'ihu mkpanaka, gbakwunyere ibu ibu. Ihe ndị a bụ isi akụkụ nke nkà ihe ọmụma onye njikwa. Lelee usoro Graham Potter's Östersund – nke meriri bọọlụ Sweden.
Eziokwu #4 - Okwu ya na Pep Guardiola:
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na onye isi Man City bụ otu n'ime mmetụta kachasị na ụzọ Graham Potter si ahazi ndị otu ya ka ha kpọọ egwuregwu ahụ. Otu ụbọchị, Guardiola nwere oke iwe na Graham Potter mgbe otu Man City meriri 3-2 na Amex.
Goolu Leandro Trossard, Dan Burn na Adam Webster nyere Brighton isi atọ ha meriri Man City. Mgbe mmeri ahụ gasịrị, a na-ewe iwe Pep Guardiola (dị ka a hụrụ na vidiyo a) na-arụrịta ụka ihu na ihu na Graham.
Ka anyị nyochachara ihe kpatara iwe ji were onye njikwa Manchester City, anyị na-achọpụta na ọ nwere ike ịbụ n'ihi otu Potter siri mee otu n'ime ebumnuche Brighton. Nke a bụ ihe Pep kọwara dị ka ememe enweghị nkwanye ùgwù.
Eziokwu #5 - Okpukpe Graham Potter:
A mụrụ onye njikwa Bekee n'okpuru okwukwe Ndị Kraịst. Mgbe a mụrụ ya, nne na nna Graham Potter nwụrụ anwụ (Val na Steve) nyere ya aha etiti Ndị Kraịst - Stephen. Nke ahụ na-egosi na ọ bụ Onye Kraịst. Ọ bụ onye na-adịghị egosipụta okwukwe ya n'ihu ọha.
Tebụl dị n'okpuru na-ekpughe ozi dị nkenke gbasara Graham Potter.
Aha n'uju: Graham Stephen Potter
aha otutu: Onye njikwa England n'ọdịnihu
Ụbọchị ọmụmụ: 20th May 1975
Age: 46 afọ na ọnwa 7.
Ndị nne na nna: Steve Potter (Nna) na Val Potter (nne)
Nwunye: Rachel Potter
Children: Charlie (nwa nwoke), Theo (nwa ejima) na Sam (nwa ejima), Enweghị nwa nwanyị (nwa nwanyị)
Ezinụlọ Ezinụlọ: Solihull
elu: 6 ụkwụ 1 sentimita asatọ OR 1.85 mita
Ọnọdụ egwuregwu n'oge ọrụ: N'aka ekpe
Ezigbo Net: Nde 8.5 nde
Ihe nlereanya: Pep Guardiola
Ezigbo ndị na-agụ akwụkwọ, anyị nwere olile anya na ụdị Graham Potter's Biography na-akọwa njem ya n'elu. Ụzọ ya iji nweta aha ya bụ ihe na-adịghị mma, dịka usoro ọzụzụ ya. Mgbe anyị na-ede akwụkwọ, anyị hụrụ ọtụtụ isi oge ndị mere akụkọ Graham Potter.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ mmuta, a tụbara Graham (na-etoghị maka football) n'ime otu mbụ Birmingham - ndị na-alụ ọgụ ka ha dị ndụ. Omume na-adịghị mma mere ka ndị na-akwado ya nwee mmasị na ya. Nke ahụ (na-egbu mgbu) mere ka Potter hụ ọrụ football ya dị iche iche.
Oge kachasị mma nke egwuregwu ya bịara mgbe ọ meriri Man United, ihe ngosi nke nyere ya ọkpụkpọ England U-21. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọrụ Graham gbadara - ọbụlagodi na ala nke usoro asọmpi Bekee. A tọhapụrụ ya n'ụbọchị agbamakwụkwọ ya wee kwụsị football mgbe ọ dị afọ 30.
Mgbe ọ lara ezumike nká, Potter gara n'ịkụzi otu egwuregwu bọọlụ mahadum yana mụọ akwụkwọ. Mgbe ọ nwetasịrị nzere nke mbụ na nke master, onye njikwa ahụ chere na ọ dị mkpa ịmalite ọrụ nkuzi ka ukwuu. Obi dị m ụtọ na otu enyi jikọtara ya na Sweden.
Nwunye Graham Potter (Rachel) na nwa mbụ (Charlie) diri mmalite siri ike na ndụ na Sweden. Obi dị m ụtọ na ha gafere ya. N'ọrụ nkuzi mba ofesi mbụ ya, Potter rụrụ ọrụ ebube na klọb Sweden Östersund.
Ịkwaga Östersund site na ngalaba nke anọ nke Swedish gaa na nke mbụ wetara ya ama. Potter gbara asọmpi na Europa League, merie n'ọkwa otu ma jiri Östersund merie Arsenal. Mmezu dị otú ahụ butere ya na England, nke mbụ na Swansea na ọzọ, Brighton.
Daalụ maka iji oge gị gụọ ụdị Graham Potter's Bio anyị. Anyị na-agba mbọ maka izi ezi ka anyị na-ekesa akụkọ gbasara ndị njikwa bọọlụ. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adabaghị na nke a memoir. Ma nọrọkwa na nche maka ọtụtụ akụkọ ndụ anyị.